Natiijada shirkii deg dega ahaa ee madaxda urur goboleedka IGAD. – Radio Daljir
Natiijada shirkii deg dega ahaa ee madaxda urur goboleedka IGAD.
Agoosto 6, 2016 1:48 b 0
Hoggaamiyaasha urur goboleedka IGAD ayaa jimacadii isugu yimid shir Madaxeed deg-deg ah oo waddamada xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD, iyo wakiilada dalalka iyo ururrada kale ee caalamiga ah ay kaga arrinsanayeen xasaradda ka aloosan Jamhuuriyadda Suudaanta Koonfureed.
Waraysi-Weriye ruug caddaa ah oo kamid ah qaxootiga Yemen ee Boosaaso jooga.
DHEGEYSO-Mucaawimo loo wado gobolada dhexe oo laga amba bixiyey Boosaaso.